Akanjo ho an'ny alin'ny Halloween ny PUBG Mobile miaraka amina kinova vaovao | Androidsis
Akanjo ho an'ny Halloween ny PUBG Mobile miaraka amin'ny kinova 0.8.0 feno fiasa vaovao maro
Navaozina indray ny PUBG Mobile hanohy hanome ny atiny rehetra izany dia mihabetsaka hatrany ireo mpilalao manadio an'ity 'battle royale' ity. Androany ny lalao dia efa havaozina amin'ny fahatongavan'ireo vaovao manandanja hanatsarana ny lalao ary ampidirina amina fitaovam-piadiana, hoditra ary ireo antsipiriany manan-danja rehefa miady isika.
Izahay dia efa nizara herinandro lasa izay ny lisitra feno an'ny vaovao PUBG Mobile rehetra, ary efa nosedraina izahay tato ho ato tao amin'ny beta. Ka dia hodinihintsika ireo izay manandanja indrindra, izay hamela, ankoatry ny zavatra hafa, azonao atao ny mitady lalao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao izay miteny amin'ny fiteny iray ihany. Saingy misy antsipiriany hafa manan-danja kokoa amin'ny PUBG Mobile ho an'ny alina Halloween.
1 Akanjo ho an'ny Halloween ny akanjo PUBG Mobile
2 Ny maody alina dia tonga amin'ny PUBG Mobile
3 Milalaova lalao miteny amin'ny fiteninao
4 Antsipiriany hafa momba ny kinova vaovao
Akanjo ho an'ny Halloween ny akanjo PUBG Mobile
Tencent Games dia tsy te-hanokana ny alin'ny Halloween ary mitondra miaraka aminy hoditra, fanitsiana tarehy amin'ny sarintany ary ny fanovana fitaovam-piadiana sasany hahafahanay miala voly amin'ny lalao ankafizinay amin'ity faran'ny herinandro ity.
Namoaka horonantsary fampiroboroboana izy izay ahitanao ny ampahany amin'ireo hoditra mahafinaritra be toy ny Mety ho ny mummy na ny werewolf, izay nanampy io maody vaovao alina ho an'i Erangel io dia hanana ny rivotra iainana rehetra hiakanjo amin'ny alin'ny Halloween any PUBG.
Toy ny mahazatra dia tsy maintsy mamoha votoaty amin'ireo hetsika Halloween izay tokony hifantohantsika manomboka izao ianao, satria io no fotoana mety indrindra hahazoana akanjo vaovao izay miovaova ny fitafian'ny maherifonay an'ny "Battle Royales".
Ny maody alina dia tonga amin'ny PUBG Mobile
Angamba ny zava-baovao lehibe indrindra dia ny fahatongavan'ny maody alina any amin'ny PUBG Mobile. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity maody ity dia ny fifindrana manomboka amin'ny hariva ka hatramin'ny hariva. Izany hoe hanana fotoana ampy fotsiny ianao mahita solomaso fahitana amin'ny alina izay hanafihana ny fahavalonao nefa tsy fantatrao hoe aiza ianao; farafaharatsiny, raha mbola tsy manana solomaso mitovy ianao.
Ity maody alina ity dia manome làlana amin'ny karazana traikefa hafa, izay mangalatra sy mahafantatra ny fomba hamakivakiana ilay tany Zava-dehibe izy ireo amin'ny fahazoana mandresy sy mandresy ny sakafom-pisakafoantsika; aza adino ireo torohevitra ireo ho mpilalao tsara kokoa. Ho hitantsika ny fandehan'ny andro sy ny herinandro raha mpilalao an'arivony maro no miaina izany; PUBG Mobile izay mandalo 100 tapitrisa ny fametrahana fotsiny ao amin'ny Google Play Store.
Milalaova lalao miteny amin'ny fiteninao
Halloween, maody alina ary iray amin'ireo zava-baovao farany ilaina: ny iray azonao atao manangana ekipa miaraka amin'ireo mpilalao miteny ny iray amin'ireo fiteny roa anananao lehibe. Ao amin'ny kinova vaovao an'ny PUBG Mobile dia afaka misafidy fiteny voalohany sy faharoa ianao, amin'izay ianao afaka mahita ekipa ahafahanao mampiasa ny feonao hiresahana amin'ny ekipanao.
Mandra-pahatongan'ity kinova ity, arakaraka ny lohamilina lalaovinao, sarotra be ny mahita mpilalao miteny ny fiteninao. Ao amin'ny mpizara eropeana dia misy mpilalao izay avy amin'ny firenena arabo aza, noho izany sarotra be ny fifandraisana ary, vokatr'izany, mahazo bebe kokoa ny fandresena. Ity fanovana kely ity dia midika ho fanatsarana ny filaharanao.
Antsipiriany hafa momba ny kinova vaovao
Tsy maintsy maneho hevitra momba ny vaovao kely iray isika fitaovam-piadiana vaovao antsoina hoe QBU DMR, ny kamio fakana an'i Rony sy ny safidin'ny mozika onjam-peo an-tsokosoko ao anaty fiara; ny roa voalohany dia tsy hita raha tsy amin'ny sari-tany Sanhok vaovao tonga amin'ny kinova 0.7.0.
Na dia avy amin'ilay lisitr'ireo fanovana madinidinika aza, dia mbola afaka manaraka ny adin'ny an'ilay namono anao tamin'ny lalao isika izao. Izany hoe, afaka ny ho e ianaompijery ny laharana farany amin'ny ady.
Fampahalalana iray hafa manan-danja amin'ity fanavaozana ity, tandremo ny AKM, nanomboka nihena ny recoil rehefa mitifitra sy mihamitombo ny fahamendrehana, ka tsy ho fitaovam-piadiana intsony izay miasa amin'ny halavirana lavitra fotsiny.
Fanavaozana vaovao ho an'ny PUBG Mobile izay mitondra fanatsarana miavaka sy akanjo ho an'ny Halloween mba ho majika sy mahafinaritra kokoa ny alina. Mazava ho azy, aza hadino ny fampitahorana, azo antoka fa handray ny sasany aminareo; toy ireny lalao Android mampatahotra ireny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Akanjo ho an'ny Halloween ny PUBG Mobile miaraka amin'ny kinova 0.8.0 feno fiasa vaovao maro